ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ်ပေးသွင်းသူနှင့်လက္ကား - တရုတ်စက်ရုံ - ရောင်းသူများအသင်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သိုလှောင်ခြင်း > ခရီးသွားသိုလှောင်ရေး > ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ်
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောဆဲလ်ဖုန်း CreditCard WalletPassport ကိုင်ဆောင်သူလက်မှတ်စီစဉ်သူ။
Custom Printing Cellphone Credit ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ် Passport Holder Ticket Organizer
1pcs / opp အိတ်
25.5 * 14 * 2CM
˜STYLISHLYSMALL, SLIM & DISCREET: ပါးလွှာပြီးခေတ်မီပါးလွှာသောဒီပါးလွှာသောပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အိတ်ကပ်၊ ပိုက်ဆံအိတ် ortravel အထုပ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့် minimalism ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။
˜MADEFROM POLYESTER 300D: Polyester 300D မှထုတ်လုပ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသော walletsleeve သည်ဇိမ်ကျသောစတိုင်နှင့်ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခရီးသွားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းစသည့်အခါသင်မှီခိုအားထားနိုင်သောကြာရှည်ခံမှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
˜UNISEX; အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှစ်သက်မှု - သူတို့၏ချောချောမွေ့မွေ့သောဒီဇိုင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သားရေတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်ဤလက်များသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လူကြိုက်များသောပါးလွှာသောပိုက်ဆံအိတ်များဖြစ်သည်။ သင်၏ဘ ၀ ၌ခရီးသွားများအတွက်ကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များပြုလုပ်ပေးသည်။
Detailed pictures of ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ်.
We have BSCI audit factory for ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ်.
ထုပ်ပိုး and delivery of ကဒ်ပိုက်ဆံအိတ်.
hot Tags:: Card Wallet, China, Suppliers, Wholesaler, Factory, စျေးပေါ၊ အနိမ့်စျေး, စိတ်ကြိုက်, စတော့ရှယ်ယာ, နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး, နောက်ဆုံးပေါ်, CE, China in Made